Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay computer, cabsi laga yaabaa in telefoonka aad Android la jebiyo ama la xado? Si kastaba ha ahaatee, ka duwan music, video iyo sawiro, aad kuma wareejin karaan xiriirada Android in aad PC by furitaanka folder disk iyo darto files kuwaas waxaa si. Halkii, inay ka sameeyaan, waxaad u baahan tahay inaad hesho waxoogaa caawimaad ka xirfadeed tababare qalab Android - Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) (isticmaalayaasha Mac). Tani Tababaraha qalab Android ku siinayaa awood ay ku nuqul ka xiriirada ka Android inay PC aan dadaal.
Download Tababaraha this Android on your computer.
Tallaabooyinka fudud in aad nuqulka xiriir ka Android inay PC
Labada versions shaqeeyaan si la mid ah. Just download version saxda ah ee tababare tan Android on your computer. Ka sokow, in qayb ka mid ah kuwan soo socda, ogolaanaysaa 'isku day version Windows - Wondershare MobileGo for Android.
Tallaabada 1. Daahfurka this Tababaraha Android on PC
First of dhan, rakibi iyo abuurtaan Tababaraha this Android - Wondershare MobileGo for Android. Connect telefoonka Android ama kiniin labada via Wi-Fi ama via cable USB. Wi-Fi helaa oo keliya version Windows ah. Tababaraha Tani Android goobtii lagu ogaan doonaa telefoonka Android ama kiniin. Markaas, aad arki doonaa in telefoonka aad Android muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android si buuxda u badan telefoonada Android iyo kiniiniyada. Halkan, waxaad eegi kartaa taageeray telefoonada Android iyo kiniiniyada .
Tallaabada 2. xiriirada Transfer ka Android inay PC
Tiirka bidix, guji "Xiriirada". Markaas, suuqa kala xiriir ah uu ugu qoran yahay xaq. Dooro xiriirrada in aad rabto in lagu wareejiyo.
Guji "Import / Dhoofinta". In ay liiska hoos-hoos, doortaan "Dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer" ama "dhoofiyo oo dhan xiriirada in computer". On menu jiido hoos midig, guji "si file vCard". Raadi meel on your computer si loo badbaadiyo xiriirradaan. Marka habka wareejinta dhamaado, waa in aad guji "OK".
Ka sokow wareejinta xiriirada Android inay vCard, waxa aad awoodi kartaa in aad nuqulka kuwaas oo xiriir in Outlook Express, Muuqaalka 2003/2007/2010, Windows Live Mail iyo buugga Cinwaanka Windows.
Hadda, aad ogaato sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay computer. Ma ahan adag, soo maaha? Marka xiga, marka aad lumiso xiriirada Android ama hesho qalab cusub Android, waxaad si deg deg ah u gudbiyaan karo xiriirada si aad qalab Android aad.
Intaa waxaa dheer, iyadoo Wondershare MobileGo for Android, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan xiriirada kala iibsiga u dhaxeeya Android iyo computer. Waxaad kartaa dajiyaan playlists Lugood qalabka Android aad , maareeyaan SMS on qalabka Android aad, iyo rakibi barnaamijyadooda si xor ah. Si aad u ogaato hawlaha dheeraad ah, waxaad kala soo bixi kartaa maamulaha this Android si ay u gudbiyaan xiriirada Android inay computer.
Habka ugu fiican si ay u gubaan Windows 10 Insider Kulanka Xiisaha in USB Flash Drive
> Resource > Windows > Sida loo Copy Xiriirada ka Android inay PC